Tsamba Yekutanga yaJohani 1:1-10
Shoko reupenyu (1-4)
Kufamba muchiedza (5-7)
Tinofanira kureurura zvivi (8-10)
1 Tiri kukunyorerai nezvaiye akanga aripo kubvira pakutanga, watakanzwa nezvake, watakaona nemaziso edu, watakanyatsotarisa, watakabata nemaoko edu, iye shoko reupenyu,+ 2 (chokwadi upenyu hwacho hwakaratidzwa pachena; takaona uye tiri kupupura kwamuri+ tichikuudzai nezveupenyu husingaperi+ hwaiva kuna Baba uye hwakaratidzwa pachena kwatiri), 3 tiri kukunyorerai nezvaiye watakaona uye watakanzwa,+ kuti nemiwo muwadzane* nesu. Uye mukuwadzana uku kwatiri kuita tiri kuwadzanawo naBaba neMwanakomana wavo Jesu Kristu.+ 4 Uye tiri kunyora zvinhu izvi kuti tive nemufaro uzere. 5 Iri ndiro shoko ratakanzwa kwaari uye ratava kukuzivisai rekuti: Mwari chiedza+ uye maari hamuna kana rima. 6 Kana tichitaura kuti, “Tiri kuwadzana naye,” asi tichiramba tichifamba murima, tiri kureva nhema uye hatisi kuita zvinoenderana nechokwadi.+ 7 Zvisinei, sezvo iye ari muchiedza, kana tichifamba muchiedza tiri kuwadzana pamwe chete, uye ropa raJesu Mwanakomana wake rinotichenesa pazvivi zvese.+ 8 Kana tichitaura kuti, “Hatina chivi,” tiri kuzvinyengera+ uye chokwadi hachisi matiri. 9 Kana tikareurura zvivi zvedu, iye akatendeka uye akarurama zvekuti anotiregerera zvivi zvedu uye anotichenesa pakusarurama kwese.+ 10 Kana tichitaura kuti, “Hatina kutadza,” tiri kumuita murevi wenhema, uye shoko rake harisi matiri.
^ Kana kuti “mugoverane.”